MarketingPilot: Microsoft Dynamics CRM Maareynta Suuq geynta Isku dhafan » Martech Zone
MarketingPilot: Microsoft Dynamics CRM Maareynta Suuqgeynta Isku-dhafan
Talaado, Oktoobar 15, 2013 Isniin, Oktoobar 14, 2013 Douglas Karr
Waqtiga Akhrinta: <1 daqiiqadii
Microsoft Dynamics CRM iyo Suuq-geynta wuxuu ku siinayaa aragti aad u baahan tahay si aad si fiican ugu fahanto macaamiishaada. Iyada oo leh habdhaqan awood leh iyo suuqgeyn Analytics, waxaad si fudud u bartilmaameedsan kartaa oo aad u kala qaybin kartaa macaamiishaada, fahmi kartaa waxa ay xiiseynayaan, ka dibna ka qaybgal iyaga waqtiga saxda ah fariinta saxda ah. Microsoft Dynamics CRM iyo MarketingPilot waxay bixisaa qalabaynta suuqgeynta shirkadaha iyo maareynta ololeyaal badan.
Maareynta suuq geynta - Isku-dubbaridi oo nidaamiso howlahaaga suuq-geynta aalado firfircoon, dhammaad-ilaa-maareyn ah oo loogu talagalay inay ka caawiso ganacsiyada iyo hay'adaha qorsheynta, fulinta, iyo la socodka suuqgeynta si hufan.
Maareynta Kheyraadka Suuqgeynta - Ka ilaali kooxahaaga inay iskaashadaan oo hubi in ilaha saxda ah ay ku jiraan mashaariicda saxda ah.
Miisaaniyad - Ka hel aragti-waqtiga dhabta ah kharashka ololaha iyo miisaaniyadda suuqgeynta, oo saadaasha si ka saxsan.
Maareynta ololaha - Si fiican ula jaan qaado iibka isla markaana ku hagaaji waxtarka otomaatiga isku dhafan ee isku dhafan.
Iibsiga & qorsheynta warbaahinta - Qorshee, isbarbar dhig, oo sii xooji warbaahintaada wax iibsiga si ka fudud sidii hore.
Xalka hay'adda - Waxaa loogu talagalay adeeg buuxa, iibsashada warbaahinta, hal-abuurka, xayeysiinta, dhacdo, khibrad, PR iyo wakaaladaha jawaabta tooska ah, xallinta suuqyada 'MarketingPilot' waxay hagaajinayaan howlaha iyo hagaajinta wax soosaarka iyo faa'iidada ka fog nidaamyada maaraynta hay'adda dhaqameed.
Tags: suuqgeyntaMicrosoftmicrosoft crmDynamics Microsoftmicrosoft firfircoonaanta crm
DemoChimp: Qalabaynta Demo-gaaga
Ebook Bilaash ah: Dhageyso! Dhageysiga Bulshada ee Ganacsiga Xariifka ah